Vafambi vekuratidzira: Chirevo cheGurukota rezvekushanya muItaly chinotsausa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Italy Kuputsa Nhau » Vafambi vekuratidzira: Chirevo cheGurukota rezvekushanya muItaly chinotsausa
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Akanaka uye anofara Italy Tourism Minister
“Mwaka urikufamba zvakanaka, mabiko nemakongiresi atangazve. Ini handipe nhamba, asi ichave iri yakanaka zhizha, padyo ne2019, kana zvisiri kupfuura mune mamwe mamiriro. Muchidimbu, yakanyanya, yakanaka mwaka. "Tave kutotarisira kumwaka wechando, kubvumira mwaka une runyararo, pasina majee." Akadaro Massimo Garavaglia, Gurukota rezvekushanya kuItaly, pamusangano weRimini.
Kushandisa mazwi senge anoshamisa, nerunyararo, uye akanaka zvaisave izvo izvo vafambi vekuItaly vaida kunzwa kubva kugurukota ravo rezveKushanya.
Mushure mekunge Gurukota razivisa maonero avo akanaka nezveindasitiri yekushanya munyika yavo, vamiriri vezvokufambisa vakanzwa zvakakwana uye vakatumira tsamba yekuratidzira.
Muchidimbu, Italian Travel Agency Autonomous Movement yakaudza Gurukota rezveKushanya kuti, "Ichi hachisi chokwadi."
"Nhoroondo," akawedzera Gurukota, "Tourism yakakosha 14% yeGDP, asi inogona kusvika 20%. Hakusi kupenga. Tine kugona kukuru. Asi isu tinoda zvimwe zvinhu: semuenzaniso, yakajairika chirongwa chechikafu newaini. Ipapo isu tinofanirwa kuvavarira kuva ne60 ITS (Yakakwira technical Institute yevadzidzi ve Tourism) seSpain. Pasina kurongeka tinogona kuwana mugove wemusika. ”
Kuratidzira kweMMAVI, (Italian Travel Agency Autonomous Movement)
Mukuona kwechitatu D-Day, iro regumi nemana rekuremekedzwa, rakaungana munaGunyana 8 na10: 30 muPiazza del Popolo muRome, Mutungamiri weSangano reMafambiro Ekufamba, Enrica Montanucci, akatumira kuratidzira ku Italy Tourism Gurukota Massimo, aive muenzi kumusangano weRimini 2021 uye akapemberera mwaka wevashanyi weItaly mwaka wezvaiitika.
Tsamba yakanyorerwa Gurukota kubva kuna Mai Montanucci inoverengwa seinotevera:
"Anodiwa Gurukota Garavaglia:
"Zvamakataura kuRimini hazvitenderwe zvachose muboka rese revamiriri vekuItaly vanofamba. Kana ne 'mwaka unosvika pamatanho e2019' urikureva kune vanhu avo, vasingakwanise kuenda kumwe kunhu, vakadurura mu Italy nzvimbo dzevashanyi, uchipa, zvirinani pakuongorora kwekutanga, fungidziro yekuti zvese zvadzokera pakuonekwa zviri normal, ipapo tinogonawo kubvumirana newe. Mahombekombe akazara, mahotera akazara, vanhu vakatenderedza… mukuteedzera kwakasarudzika kweasina basa ezhizha mufaro.
“Ichi hachisi chokwadi.
"Chero ani anoshanda sevamiriri vekufamba nekutengeserana akaona vanhu vazhinji vachipfuura nemahofisi avo, vachitengeswa (zvakashata uye nematambudziko nekuda kwekusavimba uye kushayikwa kwekujekeswa kweruzivo) nzvimbo zhinji dzeItari dzinorwira nenzvimbo dzekuchengetedza pamhepo, nevane hotera vane hunyanzvi vane kazhinji akaedza kusvika kumutengi zvakananga, vatengi vanotya uye vasina chokwadi, mitengo yakakwidzwa kune kwakanyanya, uye nezvimwe. Mahotera akazara hazvireve kuti kushanya kuri kupora.
“Nyika yedu, iya yemasangano ekufambisa anoshandisa vanhu zviuru makumi masere, avo kwemakore vabhadhara mutero chinyararire uye vasina kana kumbobvunza chero chinhu, yave kumagumo kwetambo. Isu takasangana nezhizha kushomeka kwenzvimbo dzekuwedzera -kuEurope, takaona mavhoriyamu akaenzana ne80,000% pamusoro pe35, zvichingoreva chete mwaka wemwaka mukuru. Kutora… Ndira / Chikunguru, donhwe repakati i2019%. Chaizvoizvo, hapana zvachinja.
"Tinotenda mukushinga kwenyu, asi tinotenda zvakare kuti ramangwana ratiri kutarisana naro rinoda rutsigiro rwakakosha runofanirwa kupihwa nekuchimbidza. Nechikonzero ichi, zvinogona kunge zvine njodzi uye hazvibatsiri kuburitsa zvirevo zvemanyepo.
“Kubva kuna MAAVI, nekudaro, kwaunzwa kwauri chikumbiro chekudzora mashandisiro uye nekutsausa mashandisirwo enhau, kuteerera kuridza mhere 'kwekutambudzika nekupererwa' kwevafambi uye, kune vamwe vatinoshanda navo, chikumbiro chekudzokera mumigwagwa munaGunyana 8. Akawanda uye akarwa kupfuura enguva yekupedzisira kupokana nebla bla bla vachishevedzera vemasangano, 'Zvakwana mazwi.' Inguva yezvokwadi. '”
Nyamavhuvhu 25, 2021 pa01: 51
Nehurombo mumadhorobha ehunyanzvi seRome takarasikirwa nemapoka uye nevashanyi vekuEurope.